HEALTH Archives - MATUPI TIMES OLTHANG
စငွကြာပူပှနရွောကပွှီးSHNနဲ့အခှိနွ၁၄ရကအွတောအတှငွးသခှောတာက၁)အိမတွံခါးအပှငလွုံးဝမထှကရွ။၂)ICA ရဲ့Location checking ကိုတနာရီအတှငွးReply လုပရွမယွ။ ဒီ၁၄ရကအွတှငွးကနှ ောဘွာတှလေုပရွငကွောငွးမလဲဆိုပှီးအစီစဉဆွှဲနစဉပွေဲရှိသေးတယွ။ မိသားစုနဲ့ထိထိကပကွပနွရမှေုကိုအတတနွိုငဆွုံးထိနွးရပမေဲ့မိသားစုနဲအတူတူနရတောကှနပတွေဲ့အုပစွုကရှိနတောသတိထားမိရပါတယွ။အဓိကကတော့မ ဟသေီပေါ့။ ဟိုဟာလေးလုပပွေးပါအုံး၊ဒီဟာလေးလဲဒီလိုလုပထွားနောွ ဆိုပှီးအမညစွာရငွးတိတိကကှပှှလို့မရတဲ့အိမအွလုပတွှကအလေိုလိုကိုယ့အွလုပဖွှဈလာတယွ။ အိမမွှာမှာတာအားမရလို့လား၊အလုပကွနပှေီးတော့ဖုနွးနဲ့တဖုံစီစီရီရီရှကပွှတယွ။ကနှောကွလဲဘယရွမလဲတခှနွးမခံပှနပွှောရတာပေါ့။”အေးပါကှာ၊အေးပါကှာလို့”။သမီးငယကွလဲကှောငွးပုံမှနသွှားနရတေော့ အိမမွှာကအိမစွောင့အွစိုးရရဲ့စဈသားမှားဆိုလို့ကနှောနွဲ့ကှောငွးမဖှင့သွေးလို့မတကသွေးတဲ့သမီးကှီးပဲ ရှိတယလွေ။ အိမမွှုကိဈစအဝဝ၊တိုငွးရေးပှညရွေး၊စီးပှါးရေး၊လူမှုရေးနဲ့အမှိုးအမညမွသိတဲ့ကိဈစမှားကိုလဲဖှရှငွေးရသေးတယွ။ညဖကရွောကတွိုငွးလဲမိသားစုအစညွးအဝေးကနေ့စဉကွငွှးပရသေးတယွ။-မဟသေီက ဦးဆောငဆွှေးနှေးသူနဲ့GS-သမီးငယကွ နေ့စဉကွှောငွးတကပွီးလုပဆွောငရွတာကိုအစီရငခွံစာတငွ -သမီးကှီးက Covid-19 Update နဲ့Singapore အစိုးရရဲ့သတငွးထု တပွှနခွကှကွိုအတိုခှုံးတငပွှ-ကတှောကွတော့အိ မစွောင့အွစိုးရလုပွ ငနွးတာဝနမွှားကိုတငပွှ-ဟိုအရေးဒီအရေးတငပွှကှပီးမဟသေီရဲ့ဦးဆောငမွှုနဲ့အစညွးအဝေးကိုအောငမွှငစွှာအဆုံးသပကွှတယွ။ ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတသွေးပါ။နေ့တနေ့ရဲ့မိသားစုဆုတောငွးကည၉နာရီမှာလုပကွှတယွ။တဦးခငွှးကမွှးစာဖတွ၊ဝမှှေ၊ဆုတောငွးတငပွှပှီးအတူတူဆုတောငွးကှတယွ။သမီး၂ယောကကွကမွှးစာဖတတွဲနရောမှာစာကှကှပေါတယွ။သမီးကှီးဆိုရငနွေ့စဉဖွတတွဲ့သမမြာကမွှးစာတှကေိုသသခှေောခှာမှတသွားထားပှီးသကသွခေံဝမှှတတေတွယွ။ သမီးငယကွလဲတမှိုး ပါ။ကမွှးစာကိုဟိုရှေးဒီရှေးမလုပတွတပွါ။ ကမွှးစာကိုအခနွးလိုကဖွတတွတပွှီးရေးမှတထွားတယွ။သိပမွရှငွးတာတှကေိုလဲမှတထွားတတတွယွ။သိပမွပှောပှတတပွမေဲ့ အစီအစဉစွနဈကတှယွ။ကနှောတွို့ကတှော့စွာသိပမွကှကှပေါ။ကမွှးစာဖတတွဲ့နရောမှာလဲဟိုရှေးဒီရှေးကိုယကွှိုကတွာပဲဖတတွတကွှတယွ။ တကယဆွိုရငအွခနွးလိုကစွနဈတကလှေ့လာနိုငရွငပွိုကောငွးမှာပါ။မိသားစုဆုတောငွးခှငွးနဲ့နေ့တနေ့ကွုအဆုံးသပကွှပါတယွ။ကနှော့SHN ကတော့တဝတကွှောပွှီးမှောကနွပေီ။SHN…
စငျ်ကာပူပွနျရောကျပွီးSHNနဲ့အခြိနျ၁၄ရကျအတောအတှငျးသခြောတာက၁)အိမျတံခါးအပွငျလုံးဝမထှကျရ။၂)ICA ရဲ့Location checking ကိုတနာရီအတှငျးReply လုပျရမယျ။ ဒီ၁၄ရကျအတှငျးကနြ ောျဘာတှလေုပျရငျကောငျးမလဲဆိုပွီးအစီစဉျဆှဲနစေဉျပဲရှိသေးတယျ။ မိသားစုနဲ့ထိထိကပျကပျနရေမှုကိုအတတျနိုငျဆုံးထိနျးရပမေဲ့မိသားစုနဲအတူတူနရေတာကြနေပျတဲ့အုပျစုကရှိနတောသတိထားမိရပါတယျ။အဓိကကတော့မ ဟသေီပေါ့။ ဟိုဟာလေးလုပျပေးပါအုံး၊ဒီဟာလေးလဲဒီလိုလုပျထားနောျ ဆိုပွီးအမညျစာရငျးတိတိကကြပြွလို့မရတဲ့အိမျအလုပျတှကေအလိုလိုကိုယ့ျအလုပျဖွဈလာတယျ။ အိမျမှာမှာတာအားမရလို့လား၊အလုပျကနပွေီးတော့ဖုနျးနဲ့တဖုံစီစီရီရီရှကျပွတယျ။ကနြောျကလဲဘယျရမလဲတခှနျးမခံပွနျပွောရတာပေါ့။”အေးပါကှာ၊အေးပါကှာလို့”။သမီးငယျကလဲကြောငျးပုံမှနျသှားနရေတော့ အိမျမှာကအိမျစောင့ျအစိုးရရဲ့စဈသားမြားဆိုလို့ကနြောျနဲ့ကြောငျးမဖှင့ျသေးလို့မတကျသေးတဲ့သမီးကွီးပဲ ရှိတယျလေ။ အိမျမှုကိစ်စအဝဝ၊တိုငျးရေးပွညျရေး၊စီးပှါးရေး၊လူမှုရေးနဲ့အမြိုးအမညျမသိတဲ့ကိစ်စမြားကိုလဲဖွရှေငျးရသေးတယျ။ညဖကျရောကျတိုငျးလဲမိသားစုအစညျးအဝေးကနေ့စဉျကငြျးပရသေးတယျ။-မဟသေီက ဦးဆောငျဆှေးနှေးသူနဲ့GS-သမီးငယျက နေ့စဉျကြောငျးတကျပီးလုပျဆောငျရတာကိုအစီရငျခံစာတငျ -သမီးကွီးက Covid-19 Update နဲ့Singapore အစိုးရရဲ့သတငျးထု တျပွနျခကြျကိုအတိုခြုံးတငျပွ-ကတြောျကတော့အိ မျစောင့ျအစိုးရလုပျ ငနျးတာဝနျမြားကိုတငျပွ-ဟိုအရေးဒီအရေးတငျပွကွပီးမဟသေီရဲ့ဦးဆောငျမှုနဲ့အစညျးအဝေးကိုအောငျမွငျစှာအဆုံးသပျကွတယျ။ ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတျသေးပါ။နေ့တနေ့ရဲ့မိသားစုဆုတောငျးကည၉နာရီမှာလုပျကွတယျ။တဦးခငြျးကမြျးစာဖတျ၊ဝမြှေ၊ဆုတောငျးတငျပွပွီးအတူတူဆုတောငျးကွတယျ။သမီး၂ယောကျကကမြျးစာဖတျတဲနရောမှာစာကွကွေပါတယျ။သမီးကွီးဆိုရငျနေ့စဉျဖတျတဲ့သမ်မာကမြျးစာတှကေိုသသေခြောခြာမှတျသားထားပွီးသကျသခေံဝမြှေတတျတယျ။ သမီးငယျကလဲတမြိုး ပါ။ကမြျးစာကိုဟိုရှေးဒီရှေးမလုပျတတျပါ။ ကမြျးစာကိုအခနျးလိုကျဖတျတတျပွီးရေးမှတျထားတယျ။သိပျမရှငျးတာတှကေိုလဲမှတျထားတတျတယျ။သိပျမပွောပွတတျပမေဲ့ အစီအစဉျစနဈကတြယျ။ ကနြောျတို့ကတြော့ျစာသိပျမကွကွေပါ။ကမြျးစာဖတျတဲ့နရောမှာလဲဟိုရှေးဒီရှေးကိုယျကွိုကျတာပဲဖတျတတျကွတယျ။တကယျဆိုရငျအခနျးလိုကျစနဈတကလြေ့လာနိုငျရငျပိုကောငျးမှာပါ။မိသားစုဆုတောငျးခွငျးနဲ့နေ့တနေ့ကျုအဆုံးသပျကွပါတယျ။ ကနြော့SHN…
MATUPI KHOPUI COVID-19 TLOH NGAIHTHUEN CALA BARHAN BIBI RHEOK LOH A SAWTLET UH
Pakuku lamkah akalo rhoek te Matupi,Hakha,Mindat longcut ah Covid(19)tloh nah hnin takuem sawtlet nah akhueh ucoeng. Tihnin hang ah. Rhamvoel(ႏိုင္ငံျခား.kah akalo rhoek amah Im ah duem om mueh la kuemsuem thai pawt dong.ah Thangvuen lam…
“Singapore ka pha neh “Stay Home Notice” ni 14 im ah ka duem ni
Matupi- Rangoon lam ka loh ka om nah Singapore tah 23 March khothun ah ka pha tih immigration counter pha hlan ah “Home Stay Notification-SHN”form fill up sai tih Immigration officer rhoek loh checking asai…
၁/ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှမြန်မာပည်၊ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာသော ချင်းအမျိုးသား တစ်ဦးထံမှ coronavirus positve ဖြစ်ကြောင်း မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာမှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည် ၂/ ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်မရှေးမနှောင်း၌ပင်လူနာအခြေအနေသက်သာပြီဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်၃/ လူနာသက်သာသော်လည်းကူးစက်ခံသောသူများ၊ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်စီမံချက်စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်အထူးလိုအပ်ပါသည် ၄/စီမံချက်ဆိုရာ နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ပြည်နယ်၊ခရ်ုင်၊ မြိုနယ်၊ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်၊ မိသားစု၊ တစ်ကိုယ်တော် စသည်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ဘာသာရေးအဖွဲ့ပစည်းများပူးပေါင်းကာ ရောဂါကာကြိုတင်ငာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသားအရေးတစ်ရပ်အဖြစ် အလေးပေးဆောင်ရွက်သင့်ပါသည် ၅/ရောဂါကူးစက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ရမည် Level 1.23.4စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ကာ…
တီးတိန်မြို့နယ် တွင် COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိသူ လူနာ၏ ကျန်းမာရေးအနေအထား ပုံမှန်ရှိဟုဆို
အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ သည် လက်ရှိတွင် ချင်းပြည်နယ်၊တီးတိန်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ “ သက်ဆိုင်ရာ တီးတိန်ဆေးရုံအုပ်ကနေတစ်ဆင့် Facebook မှာ friendလုပ်လိုက်ပါတယ်၊videocallနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်ပါတယ်၊သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်လဲဆိုတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့၊ဘာလက္ခာဏာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ဖျားတာနာတာတွေမရှိဘူး၊အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြသနာဘာမှ မရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်၊သူ့အနေနဲ့ နေရထိုင်ရလည်း အဆင်ပြေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် “ ဟု ချင်းပြည်နယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးမှူးဒေါက်တာအောင်ငွေစံမှယနေ့ပြုလုပ်သည့်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏တီးတိန်မြို့နယ်ရှိလူနာနှင့်ပတ်သက်သည့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြောသည်။ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရ အမိန့်ကြေညာစာတွင်လည်း အဆိုပါလူနာမှာ ကိုယ်ပူခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း မရှိပဲ ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဒေါက်တာအောင်ငွေစံမှ ဆက်ပြီး “…
BREAKING NEWS COVID-19 TLOH NAH HLANG TLO PAHNIH KOL RAM AH HMUH COENG
ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင် COVID-19 ရောဂါ လူနာရှင် နှစ်ဦး စတင်တွေ့ရှိ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင် COVID-19 ရောဂါ လူနာရှင် နှစ်ဦး စတင်တွေ့ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက မတ် ၂၃ ရက် ည ၁၂ နာရီခန့်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးမှာ ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် တစ်ဦးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ဓမ္မဒူတ ဇေတဝန်တောရ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက်ရှိ အသွားအလာစောင့်ကြပ်ခြင်း သတ်မှတ်ထားသည့်…
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မနေ့က သေဆုံးသူ ၁၅၀၀ ကျော်ရှိ
နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မနေ့က တစ်ရက်ထဲမှာတင် သေဆုံးသူ ၁၅၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာချက်အရ မနေ့က မနက်ပိုင်းအထိ သေဆုံးသူ ၁၁၃၉၇ ယောက် ရှိခဲ့ရာကနေ ဒီနေ့မနက်မှာ ၁၃၀၄၉ ယောက် အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ မနေ့က သေဆုံးသူ အများစုဟာ အီတလီနိုင်ငံက ဖြစ်ပြီး အီတလီမှာ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၄၈၂၅ ယောက်ရှိနေပါပြီ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက…
မလေးရှားနိူင်ငံသားဆရာဝန်တစ်ဦး(ရက်နေ့ ကိုလိုနာဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးဆက်မှုကြောင့်ကြောင့်သေဆုံးပြန်ပြီ
မလေးရှားနိူင်ငံတွင် အလျှင်အမှန်ပြန်ပွားကူးစက်လျက်ရှိသောရောဂါပိုးကြောင့် ယမန်နေ့တွင် ကူးစက်ခံနေရသူစုစုပေါင်း(၁၁၈၃)ယောက်ရှိပြီး သေဆုံးသူစုစုပေါင်း(၈)ယောက်ရှိနေပါသည်။သို့သော်ထိုရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုမလေးရှားနိူင်ငံကျန်းမာရေးဌာနမှထိန်းချုပ်နိူင်မှုမရှိသေးသဖြင့် လူအများ စိုးရိမ် ကြောက်လန့်နေကြပါသည်။ ယနေ့(၂၂.၃. ၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်သေဆုံမှု့ အမှတ်(၉)လူနာအမှတ် (၈၉၀) အသက် (၄၈ )နှစ် မလေးနိုင်ငံသား အမျိုးသားမလေးရှား ကျန်းမာရေးဌာန၏ ဆရာဝန် ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်သည် ယင်းသည် တူရကီ နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ဖူးပြီး (၁၇.၃. ၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိပြီး (၁၈ ရက်)နေ့တွင် အသက်ရှူကျပ်ခြင်း နှင့်…